नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्तो समाचार पनि पढ्नु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना ! पाँच भाइकी एक्ली पत्नी, जो हरेकसँग पालै–पालो रात विताउँछिन् !!!
एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्तो समाचार पनि पढ्नु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना ! पाँच भाइकी एक्ली पत्नी, जो हरेकसँग पालै–पालो रात विताउँछिन् !!!
छिमेकीमुलुक भारतको देहरादुनकी २१ वर्षीया राजो वर्मा ५ भाइकी एक्ली पत्नी हुन् । जो हरेक रात आफ्ना एक पतिका साथ सुत्ने गर्छिन् । राजोका एक छोरा पनि छन् र उनी आफ्ना पतिसँग खुशि छिन् । त्यस्तै उनका पतिहरुले पनि
आफूहरु एक पत्नीकै साथ सन्तुष्ट भएको बताएका छन् ।
महाभारतमा ५ पाण्डवकी एक्ली पत्नी थिइन्, द्रौपदी । ठीक त्यस्तै पौराणिक कथा जस्तो लाग्ने राजो वर्माको विवाह ५ भाइसँग गतवर्ष भएको थियो । राजोलाई यो कुरा थाहा छैन कि उनको बच्चा ५ भाइ मध्ये कसको हो ?
तथापी राजो आफ्ना पाँचै पतिसँग खुशि छिन् । देहरादुनको उक्त गाउँमा यस्तो परम्परागत रीति भएका कारण आफूहरुले समेत यसलाई मान्दै आएको राजोको पतिहरुको भनाई रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्